१ लाख युरो | Diyopost
२४ घण्टामा १६७८ जना निको हुँदा २९७७ संक्रमित थपिए
काठमाडौं, ८ साउन । बितेको २४ घण्टामा देशभर २९७७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा १६७८ जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका…
भीम रावलद्वारा राजीनामा फिर्ता
निषेधाज्ञा खुलेसँगै बढ्यो सङ्क्रमण, यस्ता छन् कारण
काठमाडौं, ८ साउन । निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ पनि उकालो लागको छ । पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमणदर उकालो लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।…
गृहमन्त्री खाँडले तोडे प्रहरी भित्रको ‘जाम’ : १८ वर्षदेखि रोकिएको ९८ सइको इन्सपेक्टरमा बढुवा !
मेगा बैंकले लत्यायो अदालतको फैसला : सिइओ खुँजेलीद्वारा फसाइएका थापामाथि ज्यादती !
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता पाएको मेगा बैंकले श्रम अदालतको फैसला लत्याएको छ । हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बाट फसाइएका तात्कालिन मेगा बैंक मुख्य…
लामो दूरीको सवारी साधन खुला गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृहमन्त्रालयको सर्कुलर !
काठमाडौं, ७ साउन । गृह मन्त्रालयले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसहित ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओहरुलाई पत्राचार गरेको छ। गृहले मध्यम तथा…
अमेरिकन खोपले बृद्धको मृत्यु भएपछि धादिङमा खोप लगाउन बसेकाहरु भागाभाग !
काठमाडौं, ८ साउन । कोरोना भाइरस विरुद्ध अमेरिकन खोप जोनसन एण्ड जोनसन लागाउन हिँडेरै खोप केन्द्र पुगेका एक बृद्धको निधन भएपछि धादिङमा खोप लगाउन बसेकाहरु भागाभाग भएको छ । उनीहरु धादिङका विभिन्न स्थानमा लाइनमा बसेका थिए । ‘बृद्धको निधन भएको…
अमेरिकन खोप जोनसन एण्ड जोनसन लगाएको १० मिनेटमै धादिङमा एक जनाको मृत्यु
आजैदेखि लामो दूरीको सवारी साधन खुला : यस्तो छ सिडिओको निर्देशन (पत्रसहित)
चितवन निकुञ्जमा भाले गैँडा मृत फेला
मदिरा सेवन गरेर मृत्यु भएका मजदुरको शव तीन दिनपछि आफन्तलाई
गोलभेँडाले मूल्य पाएन, कृषक मर्कामा
जुवा मुद्दाका फरार प्रतिवादी पाँच वर्षपछि पक्राउ
बागलुङमा सवारी कारबाहीबाट ६७ लाख राजश्व सङ्कलन
काठमाडौं, ३ साउन । गत आर्थिक वर्षमा बागलुङमा १२ हजार…
२०७८ साउन ३
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था
काठमाडौं, ३१ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक…
सुनको मूल्य ९२ हजार २०० पुग्यो
काठमाडौं, २३ असार । केही दिनयता लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य…
मेस्सी बार्सिलोनामै बस्न तयार
युरोकप २०२० मा पराजित भएपछि इंग्ल्याण्डका समर्थकद्वारा इटलीका समर्थकमाथि हातपात
एजेन्सी । घरेलु टिम इंग्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ गोलले पराजित…
दर्शक विना नै सञ्चालन हुने टोकियो ओलम्पिक
काठमाडौं, २५ असार । विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक दर्शक विना…
कोपा अमेरिकाको उपाधिका लागि ब्राजिल र अर्जेन्टिना भिड्ने
काठमाडौं, २३ असार । कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा पाखा लगाउँदै अर्जेन्टिना…
काठमाडौं, ८ साउन । उपत्यका भित्रने लामो दुरीका सवारी साधनलाई आजैदेखि आवात जावत खुला गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आज सरोकारवालाहरु बीचको छलफलले यस्तो निर्णय लिएको हो ।…
ओली सरकारले पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा ११ किलो सुन गायब पारेको खुलाशा !
नाम मात्रैको गुप्तचर विभाग र नेपाली सेना खारेज गरेर कृषी सेना बनाऔँ
लेखनाथ पोख्रेल विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झण्डा बोकेर राजतन्त्रविरोधी नारा लगाउँदै विशाल मानव सागर रत्नपार्कबाट जमल हुँदै नारायणहिटी राजदरबारतर्फ सोझिँदै थियो । विशाल मानव सागर दरवारमार्गस्थित राजा महेन्द्रको शालिकतर्फ अघि बढ्दै…
पक्राउ परेका काभ्रेली गुण्डा नाइकेसँग निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साँठगाँठ
रुपा सुनारलाई सुरक्षा दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश : ६ बुँदे आदेशको पुर्णपाठ !
काठमाडौं, ३१ असार । जातिय छुवाछूतको शिकार बनेकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई सुरक्षा दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सञ्चारकर्मी सुनारले आफूमाति जातिय छुवाछुत गर्ने घरबेटीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै…
रुपा सुनार विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्तापछि मोर्चाले भन्यो,–‘पिडितलाई फसाउने प्रपञ्च’ !
काठमाडौं, २७ असार । कोठा खोज्ने क्रममा घरबेटीबाट जातिय विभेदको शिकार भएकी सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक अभियान्ता रुपा सुनार विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । महानगरिय प्रहरी बृत सिंहदरबारमा उजुरी दर्ता…
एनआरएनएद्वारा जुम्ल्याहा बच्चासहित अलपत्र परेकी आमाको यूएईबाट उद्दार
देशव्यापी लकडाउन जारी रहेपनि बंगलादेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दो
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पूरा, चीनमा उत्सवको तयारी
भारतमा थप ४८ हजार सङ्क्रमित, १२ सयको मृत्यु
भोकाको लागी अन्नदाता भए पल शाह
सम्झनामा सुशांत : न्यायको लागि पर्खिरहेका आफन्त
‘करिना बहिष्कार’ अभियान किन चल्यो ट्विटरमा ?
लकडाउनमा घुम्न निस्किएपछि टाइगर र दिशा विरुद्ध एफआइआर दर्ता
युट्युबको ट्रेण्डिङमा प्रकाश सपुतको ‘मेरो पनि होइन र यो देश ? ’
साङ्गीतिक यात्रा बाट बिदा लिदै नितेश जंग कुवर
अब अन्तरीक्षमै उडेर बिहे गर्न पाइने !
जब बिहे सम्पन्न हुने बित्तिकै दुलहीले ‘मार्शल आर्ट’ देखाइन् ! ‘भिडिओ सिहत’
जहाँ मुसुक्क नहाँसेसम्म भित्र छिर्नै पाइन्न
पोखराको एउटा गाउँमा गाईले नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि सबै दङ्ग !
अन्तत : नछुट्टिने भनेर १२३ दिनसम्म सँगै हतकडी लगाएका जोडीले गरे डिभोर्स ! ‘भिडियो सहित’
जन्मियो अनौठो बाच्छो : दुई मुख, दुई कान र चारवटा आँखा !
पोर्नोग्राफीको लत : खस्किँदै दम्पतीको यौन–जीवन
स-साना कारण : जसले मान्छेमा प्रेम भावना टुट्छ !
कोरोनाको डेल्टा भेरियन्टले ८५ देशमा मच्चायो खलबली, कुन-कुन देशमा कस्तो असर ?
पर्सामा चट्याङ लागेर तीन जनाको मृत्यु
थप २४४४ जनामा संक्रमण पुष्टि, ४२ जनाको मृत्यु